नेपाल गणित समाजले मनायो ४२ औं वार्षिकोत्सव : RajdhaniDaily.com -
Home समाज नेपाल गणित समाजले मनायो ४२ औं वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । नेपाल गणित समाजले आफ्नो ४२ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । बार्षिकोत्सबमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बाँस्कोटाले आधारभुत विषयलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउन नहुने बताएका छन् । उनले आधारभुत विषयलाई हटाउनुभन्दा पनि व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘गणित आधारभुत विषय हो । यो विषयलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउने होईन । बरु व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ ।’ उनले विश्वविद्यालयका शिक्षकलाई अनुसन्धानमा खटाउने गरी योजना अघि सारेको बताए । बढि भन्दा बढि अनुसन्धानमा संलग्न गराउन विश्वविद्यालय लाग्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल गणित समाजका केन्द्रिय सभापति प्रा.डा.चेतराज भट्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा त्रिभुवनविश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा.रामप्रसाद खतीवडा, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सका डिन प्रा डा कन्हैया झा, गणित केन्द्रिय विभागका प्रमुख प्रा. डा. टंकनाथ धमला, निक सिमोन्स ईन्स्टिच्युट नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. अनिल श्रेष्ठ, एसोसिएशन अफ नेपालीज म्याथ्मेटिसियन्स इन अमेरिकाका सभापति डा केशव पोखरेलले गणित विधाका महत्व माथी प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा समाजका पूर्वसभापति लगायत नेचुरल साइन्स विधाका धेरै बैज्ञानिकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैज्ञानिक सत्रमा अमेरिकाबाट डा. देबेन्द्र बन्जाडेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो सत्रको अध्यक्षता प्रा.डा घनश्याम भट्टले गर्नु भएको थियो । समाजका वार्षिक गतिविधिमाथि समाजका उपसभापति प्रा डा दिलवहादुर गुरुङले प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रमको सन्चालन समाजका सचिव डा. दिनेश पन्थीले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल गणित समाजको बार्षिक समाचार पत्रिकाको बिमोचन गरिएको थियो । यस्तै, गत वर्ष सेवा निबृत्त हुनुभएका प्राध्यापकलाई सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा गत वर्ष स्वदेश तथा विदेशबाट विद्यावारिधि प्राप्त गर्ने समाजका आजीवन सदस्यहरुलाई समेत वधाई तथा सम्मान गरिएको थियो । स्वदेश र बिदेशबाट गरि करीव २०० जनाको उपस्थिति रहेको थियो । प्रविधि संयोजन समाजका सहसचिव डा.जीवन काफ्लेले गरेका थिए ।
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास मत लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट...
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७ हजार २११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १६ हजार १४७...
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण दक्षिण कोरिया र जापानमा रहेका नेपालीहरू त्रासमा बसिरहेका छन् । चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोप...
अमेरिकामा ग्रिनकार्ड, अस्थायी भिसा प्रक्रिया दुई महिनाका लागि स्थगित
विदेश Roshan Shrestha - April 22, 2020 0
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी ग्रिनकार्ड प्रक्रियालाई दुई महिनाका लागि स्थगित गर्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । कोरोनाभाइरसका कारण...
अन्तराष्ट्रिय Sushila Bishwokarma - August 14, 2020 0
हरि पाण्डेले गरे ३ करोड ८० लाख बराबरको छात्रवृत्ति घोषणा
प्रदेश Dhruba Lamsal - August 3, 2020 0
पोखरा । पूर्व मन्त्री एवं उद्योगपति हरिप्रसाद पाण्डेले करिब ३ करोड ८० लाख बराबरको छात्रवृत्ति वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । सोको लागि ३ करोड...
सभामुख अनुपस्थित भएपछि संवैधानिक परिषद बैठक स्थगित
Breaking News Dhruba Lamsal - December 15, 2020 0
काठमाडौं । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगित गरिएको छ । आजै बेलुका ५ बजे पुनः बोलाइएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ...
Breaking News Dhruba Lamsal - March 24, 2020 0
काठमाडाैं । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढीरहेको बेला नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको भाउमा वृद्धि भएको छ । नेपाली मुद्रा कमजोर भएपछि अमेरिकी...
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - April 2, 2021 0
सप्तरी, राजविराज । सप्तरीको राजविराजमा एक जना विद्यार्थी कोरोना संक्रमित भएका छन् । तीन महिना यता कोरोना संक्रमण दर शुन्यमा झरेको जिल्लामा पछिल्लो पटक...
भर्खरै Kumar Raut - February 5, 2021 0
Breaking News Sushila Bishwokarma - May 21, 2020 0
रुपन्देही । अस्पतालमा उपचाररत गुल्मी मदाने गाउँपालिका–६ निवासी कोरोना भाइरस संक्रमित ४१ वर्षीय पुरुषको निधन भएको छ । उनको रुपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेको क्रिमसन अस्पतालमा उपचारका...
प्रमुख Sushila Bishwokarma - May 12, 2020 0
काठमाडौं । नेपालमा एकै दिन ५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थय प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा ५७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको...